मनोरंजन Archives - Kavre Online
नेपाल आए गोविन्दा: गुन्द्रुकको झोल र भात खाने इच्छा
१९ कात्तिक, काठमाडौं । बलिउड अभिनेता गोविन्दा नेपाल आएका छन । उनी आफ्नी श्रीमती सुनिता आहुजासहित नेपाल आएका हुन् ।कात्तिक २१ बाट वीरगन्जमा आयोजना हुन लागेको ‘नेपाल चलचित्र स्वर्णिम महोत्सव’ मा सहभागी हुन उनी नेपाल आएका हुन् । उनीसँगै भारतको मुम्बई बस्दै आएकी नायिका निरुता सिंह पनि नेपाल आएकी छन् । महोत्सव आयोजक चलचित्र निर्माता संघको विशेष निमन्त्रणामा आएका गोविन्दाले पुनः नेपाल आउने अवसर प्राप्त गरेकोमा खुसी व्यक्त गरे । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै आफूहरु पूजापाठको लागि सधैँ आउने गरेको भएता पनि पहिलोपटक चलचित्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रमको लागि नेपाल आएको बताए । गोविन्दाले आफूलाई चलचित्रको कार्यक्रममा बोलाएको चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारीलाई धन्यवाद दिएका छन् । उनले आफूले नेपाली फिल्महरु हेरेको भएपनि कुनै पनि चलचित्र पूरै नहेरेको बताए । उनले नेप
चर्चित गायिका मिलनको मोबाईल र पर्स चोरी “चोर लाई लेखिन यस्तो संदेश”
गायिका मिलन नेवार अमात्य लुटिएकी छन् । उनको हातबाटै मोबाईल र महत्त्वपूर्ण सामान सहितको ब्याग लुटिएको हो । गत अगस्टको ३१ तारिख बिहिवारका दिन उनी घर फर्किदै गर्दा यो घटना भएको सामाजिक संजाल फेसबुकमा उल्लेख गरेकी छन् । काठमाडौको कुलेश्वरमा अवस्थित मेट्रो अपार्टमेन्ट अगाडिबाट एक केटाले मोबाईल संगै ब्याग र ब्याग भित्र रहेको लाईसेन्स, ब्लु बुक, एटिएम कार्ड लगायतका ब्यागमा भएका सम्पुर्ण सामान लुटिएको सो पोस्टमा लेखेकी छन् । यस्तै आफू संग कसैको नम्बर नभएको र आफन्तको नम्बर, लाईसेन्स र ब्लु बुक सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण भएको भन्दै कसैले भेट्नु भएमा आफुलाई फेसबुकमा म्यासेज गर्नुहुन वा प्रहरीकोमा बुझाईदिन अनुरोध गरेकी छन् । उनले चोरलाई अरु लगेपनि मोबाईल, लाईसेन्स, ब्लु बुक र एटिएम कार्ड कुनै पनि माध्यमबाट आफुलाई उपलब्ध गराईदिन भनेकी छन् । सो पोस्टको अन्त्यमा उनले “कागजात हेरेर अबस्य चिन्नु भयो होला
कथाले मागे मलाई ओपन हुन डर छैन
नेपाली कलाक्षेत्रमा नयाँ अनुहार भित्रिने क्रम दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । तीमध्येकी एक हुन् सोफिया पोमो लिम्बु । सोफिया छायाङ्कनको तयारीमा रहेको फिल्म ‘फटाहा फणिन्द्रे’बाट अभिनयमा भित्रिन लागेकी हुन् । यो फिल्ममा उनको अलवा अभिनेत्री सुस्मा कार्की समेतको मुख्य भूमिका रहनेछ । फिल्म अभिनयमा ‘फटाहा फणिन्द्रे’बाट डेब्यु गर्न लागे पनि कलाकारिताका लागि भने उनी नौलो होइन । थुप्रै मोडलिङ र केही म्युजिक भिडियो अभिनय गरेको अनुभव उनीसँग छ । करिब ५ वर्ष अगाडि एक फेसन सोमार्फत् आफूलाई मोडलिङ प्रवेश गराएकी सोफिया पछिल्लो समय डेमन मोडलिङ एजेन्सी र नेपाली न्यु मोडल एजेन्सीको कार्यक्रममा नियमित र्याम्पमा उत्रिने गरेकी छन् । यिनै सोफिया पोमो लिम्बुसँग रातोपाटीले गरेको दस प्रश्न । मोडलिङ किन रोज्नु भयो ? यो मेरो रुचिको विषय पनि हो । अर्काे कुरो मेरा सथीहरु पनि धेरै मोडलिङमै छन् । सङ्गत र रुचिको विषय मिलेक
बलिउड अभिनेता गोविन्दा नेपाल आउदै
काठमाडौँ। बलिउड अभिनेता गोविन्दा नेपाल आउने भएका छन् । उनी यही कात्तिक २१ गतेबाट विरगञ्जमा हुन लागेको ‘नेपाल चलचित्र स्वर्णिम महोत्सव’ मा विशेष अतिथिको रुपमा सहभागी हुन नेपाल आउन लागेका चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारीले बताए । उनी गत वर्ष पनि ‘एलजी फिल्म अवार्ड’ मा सहभागी हुन नेपाल आएका थिए । यो वर्ष उनी कार्यक्रम हुनु भन्दा २ दिन अगाडि नै नेपाल आउने कार्यक्रम रहेको छ । किनभने उनी नेपाललाई आफ्नो ससुराली ठान्दछन् ।उनले एक अन्र्तवातामा बताएका थिए , विश्वमा आफूलाई सबैभन्दा मनपर्ने देश नेपाल हो । त्यसैले गोविन्दा नेपाल आउन आफै तयार भएका हुन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गर्ने महोत्सवमा गोविन्दाले आफ्नो दमादार प्रस्तुती दिनेछन् । महोत्सवमा नेपाली फिल्मका निर्माता, निर्देशक, कलाकार, प्राविधिक, लेखक, गीतकार, संगीतकार, गायिका, वितरक, प्रदर्शक तथा पत्रकारहरु सहभागी हु
नेपाली चेली अनुष्का श्रेष्ठको अपिल: मिस वर्ल्ड जिताउन सहयोग र सेयर गर्नुस
काठमाडौंं । आगामी डिसेम्बरमा बेलायतमा हुन लागिरहेको मिसन वर्ल्ड प्रतियोगितामा नेपालको तर्फबाट मिस नेपाल अनुष्का श्रेष्ठ प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ । मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता नजिकिएसँगै तयारीमा जुटिरहनु भएको श्रेष्ठले विश्वरी रहनु भएको सबैमा सहयोगको लागि आह्रवान गर्नुभएको छ । मिस वर्ल्ड अन्र्तगत शुरुमा मिस नेपाल श्रेष्ठलाई मिस वर्ल्डको मल्टी मिडिया अवार्ड जिताउन अर्थात टप २० भित्र पर्नको लागि सहयोगको आवश्यकता देखिएको छ । आउँदो डिसेम्बरमा हुन गइहेको मिस वल्र्ड २०१९ प्रतियोगितामा नेपालको तर्फबाट मिस नेपाल अनुष्का श्रेष्ठलाई मल्टीमिडिया अवार्ड जित्नको लागि लाईक र शेयरको आवश्यक पर्छ । जसको लागि MOBSTAR! एप्स डाउन लोड गर्नुपर्नेछ । एप्स डाउन लोड गरिसकेपछि अनुष्का श्रेष्ठ सर्च गरि लाईक, शेयर गर्न सकिनेछ । जसले गर्दा भोट बढाउन सहयोग मिल्नेछ । यो जती धेरै लाईक अर्थात शेयर भयो त्यसलाई पनि मल्ट
द भ्याइसबाट बाहिरिएकी वैशाली लामालाई राजेश पायल राईले साथ दिने
काठमाडौं, १७ कार्तिक । राई इज किङ अर्थात चर्चित गायक राजेश पायल राईले द भ्याइस अफ नेपालबाट बाहिरिएकी वैशाली लामालाई साथ दिने भएका छन् ।द भ्याइस अफ नेपालको नकआउट चरणको शनिबारको सोबाट बाहिरिएको लामालाई सामाजिक सञ्जालमा मार्फत युगल गीत गाउने बताएका हुन् । सांगतिक कार्यक्रमको शिलशिलामा दुई महिनादेखि विदेश रहेको गायक राईले नेपाल चाँडै फर्किन्न लागेको बताउँदै नेपाल आएपछि गीत गाउन चाहेको लेखेका छन् । उनले वैशाली लामा बाहिरिन्दै गर्दा बोलेको भिडियो सेयर गर्दे लेखेका छन्,‘द भ्यासस अफ नेपाल आज हेर्ने मौका मिल्यो म नेपाल चाँडै आउँदैछु, उनिसँग अबसर मिले युगल गीत सेयर गर्नेछु ।’ यस्तै उनले ‘द भ्याइस अफ इन्डिया’को सिजन २ को ब्याटल राउन्डमा लामाले गाएकाे गीत समेत सेयर गरेका छन् । दार्जिलिङको लामा ‘द भ्याइस अफ इन्डिया’को सिजन २ मा तेस्रो चरणसम्म पुगेकी थिइन् । ‘द भ्याइस अफ नेपाल’मा कोच राजु लामाक
अक्षय कुमारसँग २६० करोडको प्राइभेट जेट, ८० करोडको बंगलासहित यस्ता छन् पाँच अत्यधिक महँगा वस्तु
बलिउडका खेलाडी कुमार भनिने अक्षय कुमारको सेप्टेम्बर ९ मा जन्मदिन हो । सन् १९६७ को सेप्टेम्बर ९ मा अमृतसरमा उनको जन्म भएको थियो । अक्षय कुमारको वास्तविक नाम राजिव हरिओम भाटिया हो । सन् १९९१ मा रिलिज भएको फिल्म ‘सौगन्ध’ बाट बलिउडमा डेब्यू गर्ने अक्षय कुनैबेला बैंककमा वेटरको काम गर्दथे । मेहनत र लगनको बलमा अक्षय कुमार हालै संसारको सबैभन्दा धेरै कमाई गर्ने चौथो नायक बनेका छन् । फोर्ब्सद्वारा जारी गरिएको सूचीमा उनी चौथो स्थानमा छन् । लाखौं प्रशंसक भएका नायक अक्षय कुमारबारे धेरैलाई धेरै कुरा थाहा छ तर आज हामी अक्षय कुमारको विलासी जीवनशैली र रुचीबारे जानकारी दिँदै छौं । अक्षय कुमार ६९ मिलियन डलरको कमाईसहित संसारको सबैभन्दा कमाई गर्ने सेलिब्रिटीको सूचीमा चौथो स्थानमा रहन सफल भएका छन् । यो सूचीको शीर्ष १० मा स्थान बनाउन सफल उनी एक्ला बलिउड नायक हुन् । उनको कूल सम्पत्ति १,०२८ करोड भारुभन्दा बढी छ
द भ्वाइस अफ नेपाल नकाउट राउन्डबाटै आउट भइन् : विमोचना लम्जन
काठमाडौं १५ कार्तिक / हिमालय टेलिभिजन एच डि बाट नेपालको चर्चित गायन रियालिटि शो दि भ्वाइस अफ नेपालको नकआउट राउन्डको तेस्रो दिनमा कोच प्रमोद खरेलको टिमबाट प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । ब्लाइन्ड राउन्डमा आफ्नै आमाको स्वरमा सजिएको कालजयी गीत “भैंसी लड्यो है माया…” गाएर ब्याटल राउन्ड पार गर्दै नकाउट राउन्डमा प्रवेस गरेकी दार्जिलिङकि विमोचना लम्जन अन्ततः लाइभ राउन्डमा पुग्न असफल भएकऊ छिन् ।ब्लाइन्ड अडिसनको प्रस्तुतिले सर्वाधिक चर्चा पाएकी विमोचना लम्जनले गाएको गीत सामाजिक सञ्जाल र टिकटकमा भाइरल बनेको थियो । आफ्नै आमा वरिष्ठ गायिका डिजे बराइलीको गीतलाई न्याय पुर्वक गाएकी विमोचनाले नकाउटको प्रस्तुतिमा भने खासै उत्कृष्ट प्रस्तुति दिन सकेनन् ।विमोचना लम्जनलाई बाकी सांगीतिक यात्राको लागि लाखौंलाख शुभकामना ।
नाचेरै लाखौँ फ्यान कमाएकी आश्माको लोभ लाग्दा तस्बिरहरु हेर्नुहोस
आश्मा विश्वकर्मा चर्चित डान्स ग्रुप कार्टुन क्रुकी डान्सर हुन् । काठमाडौँको असनमा जन्मिएकी आश्मा सानैदेखि डान्स गर्न रुचाउँथिन् । त्यसो त उनी विद्यालयमा अध्ययन गर्दादेखि नै बिगर डान्स गर्थिन् । मध्यमवर्गीय परिवारमा जन्मिएकी आश्माका बाबुआमालाई भने आश्माले रोजेको बाटो पटक्कै चित्त बुझेको थिएन । यो क्षेत्रमा करियर बन्दैन भनेर आफूलाई ममी–बुबाले धेरै रोक्न खोज्नुभएको आश्मा बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘मोडलिङमा करियर राम्रो हुँदैन भनेर मलाई यो क्षेत्रमा लाग्न स्वीकृति प्राप्त भएन ।’ त्यति हुँदाहुँदै पनि आश्माले आफ्नो सुर छाडिनन् । उनको ढिपीकै कारण बुबाआमा रिसाए, जसले गर्दा उनले दिनहुँजसो घुर्की र गाली सहनुपथ्र्यो । आश्माका बुबाआमाको चाहनाचाहिँ धेरै पढेर सरकारी जागिर खाओस् भन्ने थियो, तर आफ्नो इच्छा भने मोडलिङमा भएकाले उनले यसैलाई निरन्तरता दिइरहिन् । यद्यपि अहिले भने आफूले बाबुआमाको साथ–सहयोग
प्रियंकाको खुलासा- श्रीमानसँग लामो समयसम्म टाढा हुँदा ‘से’क्सटिङ र फेसटाइम से’क्स’
काठमाडौं । भारतीय नायिका प्रियंका चोपडा नवविवाहित हुन् । उनी आफ्नो कामको सिलसिलामा यात्रा गरिराख्नुपर्छ । त्यसकारण श्रीमान् निक जोनससँग निकै कम भेट हुन्छ । यस्तो अवस्थामा उनले आफ्नो श्रीमानसँगको आत्मीयता कायम राख्न प्रविधीको सहारा लिने गरेको बताइन् ।३६ वर्षे नायिकाले २६ वर्षे श्रीमानसँग धेरै समयका लागि टाढा हुँदा ‘से’क्सटिङ र फेसटाइम से’क्स’ मा विश्वास राख्ने बताइन् । प्रियंका र निकले गत डिसेम्बरमा विवाह गरेका हुन् । गत बिहिबार एन्डी कोहनको कार्यक्रम वाच ह्वाट ह्यापन लाइभमा कार्यक्रमका प्रस्तोताले ‘धेरै समयका लागि श्रीमानसँग टाढा हुँदा से’क्सटिङ र फेसटाइम से’क्समा विश्वास गर्नुहुन्छ ’ भन्ने प्रश्नमा उनले तत्काल जवाफ दिइन्, ‘पक्कै पनि’ । उक्त कार्यक्रममा उनले श्रीमानको रौं खौरन पनि सहयोग गरेको बताइन् । यसबारे उनले स्पष्टिकरण दिँदै भनिन्, ‘उनको टाउको पछाडिको रौं ।’ उनले थपिन्, ‘एकपटक, मात